कुवेतमा बसेका नेपालीले आइतबारदेखि आममाफीमा सहभागी हुन पाउने — Imandarmedia.com
१नेपालीहरुका लागि आयो अहिलेसम्मकै दुखद खबर, अब के गर्ला ओली सरकार ?
२अपरेशन सफल, दिदीबहिनी दाजुभाइ बनेर घर फर्किए
३आज थप ५७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
४भारतीय सेनाप्रमुख काठमाडाैं आउने मिति तोकियो
५नेपालमा आज मात्रै यति धेरै कोरोना संक्रमितकाे मृत्यु, कहाँ कति ?
६नेपालमा लागू भयो यस्तो नयाँ नियम, भारतलाई ठुलो झट्का
७कोरोना संक्रमणबाट नेकपा नेता चौधरीको मृत्यु
८डब्ल्यूएचओको अर्को नयाँ डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रास
९विश्वभर काेराेना संक्रमितको संख्या १ करोड ४ लाख नाघ्यो
१०मोटोपन घट्दै–घटेन् भने अपनाउनुहाेस् यस्ता कुरा
१२Tao Geoghegan Hart: Giro d’Italia winner ‘leads new generation’ – Sir Dave Brailsford
५दशैं आउन १० दिन मात्रै बाकि रहेका बेला फेरी निषेधाज्ञा सुरू, के गर्न पाइन्छ, के पाइदैन ?
६राष्ट्रपतिलाई नै कोरोना संक्रमण भएको खुलासा, सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी
कुवेतमा बसेका नेपालीले आइतबारदेखि आममाफीमा सहभागी हुन पाउने
काठमाडाैं । कुबेतमा आवासीय भिसा उल्ल‌ंघन गरी बसेका नेपालीले भोलिबाट आममाफीको प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने छन् । कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले सूचना जारी गर्न ढिलाइ गर्दा भने नेपाली कामदारलाई समस्या परेको छ ।
कुवेतले आवेदनका लागि अप्रिल २६ देखि ३० सम्म ४ दिनको समयसीमा तोकेको छ । कुबेतमा रोजगारदाता छाडेर अन्यत्रका कम्पनी वा घरमा काम गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या झण्डै ७ हजार रहेको छ ।
गत फेब्रुअरी २९ सम्म भिसाको म्याद सकिएका कामदारले आममाफी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् । उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्दैन भने नेपालसम्म आउने हवाई टिकटसमेत कुवेत सरकारले नै दिनेछ । कुवेतले आममाफीमा सहभागी हुने नेपालीका लागि निश्चित केन्द्र तोकेको छ। जिलिव हसविया क्षेत्रमा पुरुष र महिला कामदारलाई छुट्टाछुट्टै केन्द्र छन्।
पुरुषले जिलिव अल सुएखको सडक नम्बर २५० स्थित नयिम बिन मसुद पुरुष स्कुलको ब्लक नम्बर ४ र महिलाले जिलिव अल सुएखको सडक नम्बर २०० स्थित रुफाइदा अल अस्लामिया प्राथमिक महिला स्कुलको ब्लक नम्बर ४ मा जानुपर्नेछ।
फर्वानिया क्षेत्रमा बस्ने पुरुष कामदार सडक नम्बर १२२ स्थित अल मुथान्ना प्राइमरी स्कुलको ब्लक नम्बर १ मा जानुपर्नेछ। महिला कामदारलाई सडक नम्बर ७६ स्थित फर्वानिया प्राइमरी स्कुलको ब्लक नम्बर १ तोकिएको छ। दूतावासले महावुल्ला क्षेत्रका कामदारलाई तोएिको केन्द्र भने अझै खुलाएको छैन।
आवेदन दिन जाँदा २० केजीको लगेज र ७ केजीको हाते ब्याग मात्र लैजान पाइनेछ। आवेदन स्वीकृत भएपछि तोकिएको अस्थायी आश्रय केन्द्रमा बस्न पाइनेछ। नेपाल नआएसम्म त्यहाँबाट निस्कन पाइनेछैन।
जोसँग म्याद भएको सक्कली राहदानी छ तिनले ट्राभल डकुमेन्ट (यात्रा अनुमतिपत्र) लिन दूतावास गइरहनु पर्दैन । उनीहरू सीधै तोकिएको केन्द्रमा गई आवेदन दिन पाउनेछन्। त्यस्तै जिलिव क्षेत्रमा बस्ने नेपालीले भने सक्कल राहदानी नभए पनि तोकिएकै केन्द्रमा ट्राभल डकुमेन्टका लागि आवेदन दिन सक्ने, दूतावास जानु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
राहदानी साथमा नभएकाले मात्रै ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि राहदानी, नागरिकता, सिभिल आईडीको फोटोकपी र चारप्रति फोटो लैजानुपर्छ। कुनै कागज नभएकाहरूको हकमा कुवेती अध्यागमनले दिने फिंगर प्रिन्ट रिपोर्ट लिई चारप्रति पासपोर्ट साइज फोटोसहित सोही स्थानमै आवेदन दिन सकिने नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
जिलिव हसवियाबाहेक स्थानमा बसोबास गर्ने सक्कल राहदानी नभएका कामदारले भने ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन दूतावासै जानुपर्नेछ। राहदानी, नागरिकता, सिभिल आईडको फोटोकपीसमेत नभएकालाई दजिजस्थित जनरल इभिडेन्स डिपार्टमेन्टबाट रिपोर्ट लिएर गएपछि मात्रै दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्नेछ।
दूतावासले जिलिव हसविया क्षेत्रमा बस्नेबाहेकका नेपालीलाई फरक–फरक समय तोकेको छ । फर्वानिया, खैतान, सुएख, रिगाई र कुवेत सिटीमा बस्नेलाई अप्रिल २५, फाहाहिल, मंगाफ र फिन्तास बस्नेलाई अप्रिल २६, ओफ्रा, अवदली, जाहरा, सालमिया र हवाली बस्नेलाई अप्रिल २७ को मिति तोकिएको छ।
यो क्षेत्रबाहेकका नेपालीलाई अप्रिल २८ देखि ३० सम्मको अवधि छुट्ट्याइएको छ। महाबुल्ला क्षेत्रका नेपालीलाई छुट्टै सूचना प्रकाशित नभएकाले दूतावासले यो दुई दिन छुट्ट्याएको हुन सक्छ।
नेपालमा आज मात्रै यति धेरै कोरोना संक्रमितकाे मृत्यु, कहाँ कति ?
कोरोना संक्रमणबाट नेकपा नेता चौधरीको मृत्यु
डब्ल्यूएचओको अर्को नयाँ डरलाग्दो चेतावनीले विश्वभर त्रास
विश्वभर काेराेना संक्रमितको संख्या १ करोड ४ लाख नाघ्यो
राष्ट्रपतिलाई नै कोरोना संक्रमण भएको खुलासा, सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी
जो जहाँ छौँ, त्यहीँ रहेर दशैँ मनाऔँ- प्रधानमन्त्री ओली